Hormari istaraatiijiyaddaada baraha bulshada | Suubbis Blog
Horumarinta istaraatejiyadda baraha bulshada waa qayb muhiim ah oo hubinaysa in mid kasta oo ka mid ah ololehaagu kaa caawinayo inaad u dhawaato inaad la kulanto ujeedooyinka suuqgeynta. Ka dib markaad go’aansatid kanaalada aad qorsheyneyso inaad isticmaasho, waxaad u baahan doontaa inaad tixgeliso inta jeer ee aad qorsheyneyso inaad ku bosti gareyso iyo nooca waxyaalaha aad soo diri doonto.
Bilaaw adigoo u tixgilinaayo Ku billow inaad ka fikirto wixii aad ka ogtahay dhagaystayaashaada ama dadka soo booqda bogaga
Nooce ugu fican ee aad ku qanacsan tahay adiga. ayado dadka jecelyihiin sheekooyinka ku hawlan waxqabadka laakiin sidoo kale waxay kaala hadlaan baahidooda iyo caqabaddooda. Haddii aad u baahato caawimaad bilaw ah, hubi fikradaha suuq-geynta warbaahinta bulshada.
Waa inaad sidoo kale ka fekertaa sida aad u qorsheyneyso in aad ka qayb qaadato oo aad ka jawaabto qayb ka mid ah maareynta warbaahinta bulshada. Ma qorsheyneysaa inaad gaarto wax ka baxsan taageerayaasha oo aad bilawdo wada hadal? Intee jeer ayaad ka jawaabi doontaa su’aalaha iyo cabashooyinka la soo dhajiyay boggaaga? Miyaad qorsheyneysaa inaad hesho dhageys tayaasha ama dadaka soo booqda bogaga ayadoo aya jiraan dad kula tartamayo? waa inaay qeyb ku ahaata suaashii hada qeyb taas oo katirsan istaraatiijiyaddaada.
Abuuritaanka Jadwalka Warbaahinta Bulshada(Creating the Community Media Schedule)
Marka ay timaado maamulka warbaahinta bulshada,wax kalabalashada waa furaha mamuka warbahinta bulshada(social media management). Haddii aad rabto in aad macaamiishu ku hawlanaato in aay faloow gareeyaan janaal kaaga, waxaad u baahan doontaa inaad si joogta ah u soo dirto wax tayo leh. Habka kaliya ee lagu sameeyn karo waa in la abuuro jadwalka warbaahinta bulshada oo faahfaahin goorta iyo waxa aad u dirayso kanaalka.
Abuuritaanka jadwalka tifaftirka ee maareynta warbaahinta bulshada ayaa ah hab wanaagsan oo lagula socon karo ganacsiga markaad la timaado jadwalka warbaahinta bulshada. Waxaad awood u yeelan kartaa wax kabadalida jadwalka iyo tifaftirka habka u shaqeeya ganacsigaaga. Xaqiiji inaad ku darto macluumaadka asaasiga ah sida taariikhda content, iyo xiriir kasta ama sawir kasta.
Waa maxay Suuq-geynta Dijitaalka ah
know what youre talking about, why throw away our intelligence on just posting videos to you weblog when you could be giving us something enlightening